Dowladda Turkiga oo noqtay Dalkii ugu horeeyey ee ka soo Jawaaba Fatahaadaha Beledweyne - Awdinle Online
Dowladda Turkiga oo noqtay Dalkii ugu horeeyey ee ka soo Jawaaba Fatahaadaha Beledweyne
October 30, 2019 (AO) – Dowladda Turkiga aya noqotay dalkii ugu horeeyey ee ka soo jawaabta baaqii Dowladda Soomaaliya ee ahaa in gurmadka loo fidiyo dadka ay sameeyeen fatahaadaha xoogan ee ka jira qeybo badan ioo ka mid ah Soomaaliya.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa qoraal ka soo baxay waxa ay uga hadashay saameynta ka dhalatay fatahaadaha Webiyada Shabelle iyo Jubbada, kuwaas oo ay ku barakaceen dad badan oo Soomaaliyeed.
Warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa lagu sheegay in ugu horeyn ay ka tacsiyeyneyso dhimashada ka dhalatay fahadahaasi,islamarkaana ay aad uga xuntahay dhibaatadaasi.
Sidoo kale waxa ay wasaaradu sheegtay inay ka qeyb qaadaneyso gurmadka xoogan ee loo fidinayo dadka barakacayaasha ee ku dhibaateysan magaalooyinka ay ka mid ah degmada Beleweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Previous articleGudoomiyaha Gobalka Banaadir oo ka Cabanaya xubno ka tirsan Xukuumadda iyo Saraakiisha Amniga
Next articleFaa’iidoonyinka Caafimaad uu leeyahay Muuska ama Mooska